ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (၂၀)
ရာဟုလို့ခေါ်တဲ့ အသရိန်နတ်ကြီးဟာ အလွန်ကြီးမားပါတယ်။ သူ့အရပ်က ယူဇနာ၄၈၀၀-အရပ်မြင့်သော ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ သူဟာဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းတွေ ကြားရတော့ ဖူးမြော်ချင်ပေမဲ့ လူသားဖြစ်တဲ့ ဘုရားကို ငါသွားဖူးရင် ငုံပြီးဖူးနေရလိမ့်မယ်၊ သွားဖူးလို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး နေလိုက်ရာက ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းတွေ ထပ်ကာထပ်ကာ ကြားရပြန်တဲ့အခါ၊ ဖြစ်သလိုပဲ သွားဖူးတော့မယ်ဆိုပြီး သွားဖူးမြော်တဲ့အခါ ဘုရားရှင်က `မဟိမာ´ ဘုန်းတော်ဖြင့် သူ့ထက်အဆမတန်ကြီးမားတဲ့ ကိုယ်တော်သဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းပြီး လျောင်းတော်မူလျှက် အဖူးမြော်ခံတော်မူပါတယ်၊ သည်အခါ အလွန်အရပ်မြင့်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ အသူရိန်နတ်ကြီးဟာ တအားကုန်မော်ကြည့်ပြီး ဖူးမြော်ပေမဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အထက်ပိုင်း ကိုယ်တော်အဆုံးကို မမြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မေးစရာရှိလာတာက သင်္ခါရဆိုတဲ့ မမြဲခြင်းတရားတွေကို ဒီအသူရိန်နတ်တွေကကော လွန်ဆန်နိုင်နေသလား?
နောက်ပြီ ယူဇနာ ၈၄၀၀၀ ဆိုတာကလည်း မိုင်နဲ့တွက်ချက်မယ်ဆိုရင် တယူဇနာကို အချို ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ၈ မိုင်၊ အချိုက ၁၂ မိုင် ခွဲ ဆိုပြီး တွက်ချက်ကြပါတယ်။
၁ ယူဇနာ = ၈မိုင် (or) ၁၂ မိုင်ခွဲ
ဂေါတာမ မွေးဖွားတဲ့ အိန္ဒိယ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံပေါင်းရင်တောင်မှ ဒီအချိုးအစားနဲ့ အညီအမျ မိုင်ကိုတောင် ရနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုပေါ့ဗျာ ?
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးတောင် မိုင်(၄၀၀)ကျော်ပဲ ရှိတယ်.
၄၈၀၀ x ၈ မိုင် = ၆၇၂၀၀၀ မိုင်
၄၈၀၀ အမြောက် ၈ မိုင် ညီမျခြင်း ၃၈၄၀၀ မိုင်ဆိုတော့ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ ခန္ဒာ တကယ်ရှိခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရွှေမြန်မာတို့က သမိုင်းမှာ လက်မထောင်နိုင်အောင် မောင်းခတ်စည်တီး ပွဲတွေ ဟီးနေအောင် လုပ်ကြတော့မှာပေါ့နော် အခုတော့ ဒါက စာအရ တဆင့်စကား ဆင့်ကားကြားပြီး မြုတ်ဇာတ်တွေပါလို့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ ဒေါမနဿတွေ ပွားနေကြဦးမှာ အသေအချာဆိုတာ သိပေမဲ့ ရေးပြလိုက်ရပါတယ်။
ဒါတောင် ၈မိုင်နဲ့ပဲ မြောက်ရသေးတယ်. .. အထက်က အရပ်ကို ၁၂ မိုင်ခွဲနှင့် မြောက်လိုက်ရင်တော့ ပိုပြီး ကြီးမားလာပြီး မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင် ယုံတမ်းစကား ဖြစ်လာတော့နိူ်င်တာပေါ့နော်..
ဒါက အသူရိန်နတ်ရဲ့ အရပ်ပဲရှိသေးတာ ဂေါတမက သူထက် ဘယ်လောက်ကြီးဆိုတော့ မော်ကြည့်တာတောင် အထက်ပိုင်း ဂေါတာမရဲ့ ခန္ဓာကို မမြင်ရသေးဘူးဆိုတော့ ဘယ်လောက်ကြီးမလဲ ထပ်စဉ်းစားရင် ရှုးတောင်ရှုးချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ (ခေါင်းည်ိမ့် ပါးစပ်ပိတ် ကျိတ်မှိတ် ငါနားလည်ပေးမယ်)ဒါကလည်း ရတနာမွန် အတွဲ-၂၃၊ အမှတ် ၅ ကယူထားတာဆိုတော့ ယုံလိုက်ကြပါတော့ဗျာ။
ကဲကြည့်စမ်းပါအုံးဗျာ.. ဒါဖြစ်နိူင်လား မဖြစ်နိူင်လား စဉ်းစားပါအုံး မြေပြင်အထက် (၅)မိုင်ကျော်ရင်တောင် အသက်ရှုလို့ မရတော့တာ လုပ်စမ်းပါအုံး ယုံတမ်းစကားလေးပေါ့ဗျ. (သိုင်းဝတ္တူဆန်ဆန်လေး ရွှီးပြစမ်းပါအုံး) စာရေးသူနားမလည်ဘူးဘဲ ထားပါ ကျုပ်ကို နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးပါဗျာ.. စာရေးသူကတော့ အဖြေထုတ်တယ် သူတပါးေ၇ာဂါဖြစ်တော့ မကုသပေးနိူင်တဲ့ ဂေါတာမ၊ ကိုယ့်ခန္ဓာမှာ ရှိတဲ့ အနာရောဂါကိုလေ ဇီဝက ဆေးဆရာနဲ့ပဲ ကုသရတဲ့ ဂေါတာမ ဒီလိုအကောင်ကြီးကြီး လုပ်နိူင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်ဘယ်သူတုန်းဗျာ. ဒီကောင် ဘီလူးပဲဖြစ်ရမယ်. . ဘီလူးတို့ မိစ္ဆာတို့က သူတပါးကို အကျိုးပြုဖို့ အစွမ်းရှိတာမှ မဟုတ်တာ မဟုတ်မဟက်ပညာပဲ တတ်ကြတာ.
Posted by messenger at 5:58 AM
Labels: ဘုရားတော့ မဖြစ်နိူင် ဘီလူးပဲ ဖြစ်ရမယ်, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ